Xuddur oo xasilloon kaddib ka bixitaankii Al-Shabaab. - Wargeyska Faafiye
Xuddur oo xasilloon kaddib ka bixitaankii Al-Shabaab.
Guddoomiyaha degmada Xuddur Maxamed Macallin Axmed oo ku sugan Muqdisho ayaa Bar-kulan u sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ay gacanta ku hayaan ammaanka magaalada.
Maxamed ayaa ka dayriyay xaaladda nolosha ee magaalada, wuxuuna ka codsaday dowladda federaalka iyo hay’adaha samafalka inay gargaar deg-deg ah geeyaan magaalada.
Ciidamada huwanta ah ayaa la wareegay Xuddur iyadoo uusan dhicin wax dagaal ah maadaama maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isaga carartay halkaas kaddib markii ay ka war heshay in lagu soo wajahan yahay magaalada.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random Posts12 year old Somali Girl prostituted by a Somali gang in Minneapolis.Dowlad Goboleedka Somali-land oo qabsatay Saax dheerSix Alshabaab fighters killed in clashCilad Facebook gashay oo dad nool ku tilmaantay ‘kuwo dhintay’Charges: Man assaulted after speaking Somali on bus.